क्यानेडियन कैबिनेटले के गर्छ?
क्याबिनेट , वा सेन्टर, क्यानेडियन संघीय सरकारको केन्द्र हो र कार्यकारी शाखाको प्रमुख हो। देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, कैबिनेटले प्राथमिकता र नीतिहरू निर्धारण गरी संघीय सरकारलाई पनि निर्देशन दिन्छ र साथसाथै उनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ। कैबिनेटका सदस्यहरू मंत्रिमण्डल भनिन्छ, र प्रत्येकसँग विशिष्ट नीतिहरू छन् जसले राष्ट्रिय नीति र कानूनको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई असर पार्छ।
कैबिनेटका मन्त्रीहरू कसरी नियुक्त हुन्छन्?
प्रधानमन्त्री, वा प्रिमियर, क्यानाडाको गभर्नर-जनरललाई व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दछ जसले राज्यको टाउको हो। गवर्नर-सामान्यले विभिन्न मंत्रिमंडल नियुक्त गर्दछ।
क्यानाडाको इतिहासको हरेक प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लक्ष्यहरू, साथै देशको वर्तमान राजनीतिक वातावरणको बारेमा छलफल गरेको छ। विभिन्न समयमा, सेमिफाइनलमा 11 सेन्टरहरू र39 जना सामेल छन्।
जब प्रधानमन्त्री कार्यालय लेन्छ र जब प्रधानमन्त्रीले इस्तीफा गरे पछि कैबिनेटको अवधि सुरु हुन्छ। कैबिनेटको व्यक्तिगत सदस्य कार्यालयमा बस्न नसक्दासम्म उनीहरूले इस्तीफा गरे वा उत्तराधिकारी नियुक्त गरेनन्।
कैबिनेट मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी
प्रत्येक मंत्रिमंडलमा एक विशेष सरकारी विभागसँग सम्बद्ध जिम्मेवारीहरू छन्। यी विभागहरू र सम्बन्धित सेव पदहरू समयमै परिवर्तन गर्न सक्छन्, प्राय: मुख्य क्षेत्रहरू जस्तै वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक सेवाहरू, रोजगारी, आप्रवासन, स्वदेशी मामलाहरू, विदेशी कामहरू र स्थिति महिलाहरु।
प्रत्येक मंत्रीले सम्पूर्ण विभाग वा कुनै विशेष विभागका केहि पक्षहरूको निरीक्षण गर्न सक्दछ। स्वास्थ्य विभाग भित्र, उदाहरणका लागि, एक सेवकले सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू निरीक्षण गर्न सक्दछ, र अर्कोले मात्र बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्छ। यातायात मन्त्रीहरूले कामलाई रेल सुरक्षा, शहरी मामला र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या जस्ता क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्न सक्दछन्।
कसले मंत्रिमंडलका मन्त्रीहरूसित काम गर्दछ?
जब मन्त्रीहरूले प्रधान मंत्री र क्यानाडाका दुई संसदीय निकायहरू, घरको कमन्स र सेन्टसँग नजिक काम गर्छन्, त्यहाँ केही अन्य व्यक्तिहरू छन् जसले कैबिनेटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
संसदीय सचिवलाई प्रत्येक सेमिफाइनलमा काम गर्ने प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त गरिएको छ। सचिवले सेमिफाइनलमा सहयोग गर्दछ र संसदको साथ अन्य कर्तव्यको बीचमा कार्य गर्दछ।
साथै, प्रत्येक सेन्टरमा एक वा बढी "विपक्षी आलोचकहरू" छन् जसमा उनको वा विभागमा नियुक्त गरिएको छ। यी आलोचकहरू पार्टीका सदस्य हुन् जुन हाउस कमन्सको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो संख्याको साथ। उनीहरूले आलोचना र समग्र रूपमा व्यक्तिगत मंत्रिमंडलहरूको कामको आलोचना र विश्लेषणको साथ काम गरेका छन्। यो आलोचकहरूको समूह कहिलेकाहीं "छाया कैबिनेट" भनिन्छ।
क्यानाडाको प्रान्त र इलाकाहरूको बारेमा मुख्य तथ्य
क्यानाडामा तंबाकू ल्याउनु
प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर
Shattuck-St। मैरी स्कूल: चित्रा स्केटरका लागि एक बोर्डिंग स्कूल
पिंग S59 ईरान: फिर्ता खोज, र हाम्रो मूल समीक्षा
तम्बू भित्ता के हो?
अध्ययन स्पेस सिर्जना गर्नुहोस्
आधारभूत स्केटबोर्ड ट्रिक्स
प्लेट टाइटनिक्सको बारेमा
एन्जिल ओर्ब के हुन्?
ग्रैंड केन्द्रीय टर्मिनल NYC - एक छोटो इतिहास
शीर्ष लोक लिबरल कला कलेजहरू
क्लासिक होल्डन यूट
व्याकरण के हो?
अक्टोबर वोकल ब्रेकबाट छुटकारा पाउनुहोस्
स्विस पाठको दौडान विद्यार्थी व्यवहार व्यवहार गर्दै
गिटार मा 'बा, बा, ब्ल्याक भेप' को कुर्सियों को कसरि खेलायो
कार्यशालाको लागि तपाईले साइन अप गर्नु पर्ने कारणहरू
निष्कर्षको फ्रांसीसी संयोजन: उनी कसरी प्रयोग गर्ने
एक गोल्फ कोर्समा ब्लू टेेस र कसले तिनीहरूलाई खेल्नुपर्छ
10 हालै विलुप्तता एम्फिबिनीहरू
शीर्ष कन्जर्वेटिभ नोभेल्स
प्वाइमर क्रूजिंग प्वाइन्ट नमूना विधि
शीर्ष 10 पप गीतहरु 1990 को
1928 पीजीए चैंपियनशिप: डिएगल ले बदला र ट्राफी